vendredi, 12 avril 2019 11:33
Sary : Primatiora
Asa: 6%-n’ny Malagasy no manana anton’asa mendrika sy mahavelona ny fianakaviany
Ho an’izay mba miasa indray dia betsaka ireo Malagasy manana anton’asa tsy ara-dalàna. Nankalaza ny faha-100 taonan’ny Vondrona Iraisam-pirenena momba ny Asa (Organisation Internationale du Travail – OIT) i Madagasikara omaly. Lanonana natao tao amin’ny kianja mitafo Ankorondrano-Antananarivo tao anatin’ny lohahevitra « Miara-mientana ho amin’ny hoavy mamiratry ny tontolon’ny asa ». Nanamarika ny telo volana voalohan’ity taona 2019 ity ny fitarainan’ireo vehivavy malagasy niasa tany Koweit ho niharan’ny fampijaliana nataon’ireo mpampiasa azy, ka niantso vonjy hody an-tanindrazana. 106 izy ireo no nampodian’ny fanjakana, in-telo miantoana. Hatreto tsy mbola re fa nametraka fitoriana mba hanokafana fanadihana mikasika izany ambara fa fampijaliana nianjady tamin’ireo teratany malagasy ireo ny fanjakana malagasy.
jeudi, 11 avril 2019 15:48
EPP FJKM Rasalama: Nisy fitsaboana sy fizarana solomaso maimaimpoana ho an’ny mpianatra
Nahazo tombony amin’ny fizahana maso sy fizarana solomaso maimaimpoana, avy amin’ny fikambanana tsy miankina any Vardoise Frantsa, ny mpianatra ao amin’ny EPP FJKM Rasalama, Boriboritany faha-III Antananarivo Renivohitra. Ankizy mpianatra 100 mahery ao amin’ity sekoly ity no nisitraka izany. Hitohy ary hahazo izany fiahiana sosialy mahakasika ny maso izany koa ny mponina ao amin’ny Boriboritany faha -III, ka ny herinandro ho avy io no ho tontosaina izany fizahana maso sy fizarana solomaso maimaimpoana izany, hetsika izay tafiditra indrindra amin’ny vinan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana ny amin’ny fiahiana ara-tsosialy ny mponina, ao anatin’izany ny vehivavy sy ny ankizy.